समयौनिक व्यक्तिहरू कसरी यौन सम्पर्क गर्छन्? - Rukuchee Blog
समयौनिक व्यक्तिहरू कसरी यौन सम्पर्क गर्छन्?
Rukshana Kapali	Gender and Sexual Minorities, Homosexuality, Sexuality	 February 25, 2019 February 25, 20190Minutes
धेरैका मनमा उब्जेको प्रश्न एउटा हुनसक्छ, समयौनिक व्यक्तिहरू अर्थात् अङ्ग्रेजीमा homosexual व्यक्तिहरू कसरी सेक्स गर्छन्। समयौनिक व्यक्तिहरू भन्नाले समान लिङ्ग भएका व्यक्ति प्रति आकार्षित हुने हो। यस लेखमा हामी त्याचलिङ्गी(cisgender) पुरुष-पुरुष र महिला-महिला बीचको यौन सम्पर्क कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। समयौनिक व्यक्तिहरूको आफ्नै सेक्स गर्ने र यौन सन्तुष्टि लिने तरिका हुन्छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि विषमयौनिक(heterosexual) व्यक्तिहरू जो विपरीत लिङ्गका बीच यौन सम्पर्क राख्दछन्, उनीहरू बीच उने लिङ्गो-योनी मैथुन नै एक मात्र यौन सन्तुष्टिको आधार हो भन्ने भ्रमा रहेका छौँ। त्याचलिङ्गी महिला र पुरुष बीच हुने यौन सम्पर्क बाहेकका विभिन्न यौन सम्पर्कहरूमा एक त्याचलिङ्गी पुरुष र अर्को त्याचलिङ्गी पुरुष अनि एक त्याचलिङ्गी महिला र अर्को त्याचलिङ्गी महिला बीचको यौन सम्पर्कका बारेमा चर्चा गर्छौँ। समयौनिक सम्बन्धहरूमा यौनानन्द लिने विभिन्न तरिकाहरू छन्। कोही नरमतापूर्वक यौन सम्पर्क राख्छन्, कोही कठोरात्मक। कसैलाई प्रवेशात्मक यौन सम्पर्क मन पर्छ भने कसैलाई गैर-प्रवेशात्मक। कोही सामान्य यौन सम्पर्क अभ्यास गर्छन् भने कोही गुनुत्वरीडाष्टी (BDSM)।
तपाइँलाई यी लैङ्गिकता र यौनिकता सम्बन्धित शब्दवालीका बारेमा थहा छैन भने यो अर्को लेख पढेर यसका बारेमा बुझ्नु होला: के हो LGBTI ( लेख)
पुरुष-पुरुष बीचको यौन सम्पर्क
तस्वीर स्रोत :TLA Releasing
पुरुष-पुरुषबीच सेक्स गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। मुख्यतः गुदद्वार मैथुन र मुख मैथुन हुनेछ। यस बखत एक पुरुषले अर्को पुरुषको गुदद्वारमा लिङ्गो छिराएर यौन सम्पर्क राख्छन् वा एक अर्काको लिङ्ग चुसेर पनि यौन सम्पर्क राख्छन्। गुदद्वारबाट गुदानहरमा अवस्थित नसाहरूका कारण गुदद्वार मैथुनमा चरम यौनानन्द प्राप्ति गर्दछन्। पौरुष ग्रन्थी (Prostate)मा पनि गुदद्वार मैथुनले उत्तेजित पार्ने हुनाले चरम यौनानन्द प्राप्त गरिन्छ। सह-लिङ्गो घर्षण (frotting) भन्नाली दुबै जनाले एक अर्काको लिङ्गो घर्षण गरेर यौनानन्द लिने तरिका। लिङ्गत्बक-बन्धनी नसाहरू (frenulum nerve) लिङ्गोको टुप्पोको छाला तल सार्दा अथवा फर्काउँदा दुबैको घर्षणबाट चरम यौनानन्द प्राप्ति गर्न सकिन्छ। उरुमैथुन (Intercrural sex) भन्नाले आफ्नो लिङ्गोलाई अर्को पुरुषको तिघ्राको बीचमा घर्षण गरेर यौनानन्द प्राप्त गर्ने माध्यम हो। यसबाट पनि समयौनिक पुरुषहरूले यौनानन्द लिने गर्दछन्। यसै गरी एउटा पुरुषको लिङ्गोको टुप्पोलाई अर्को पुरुषको लिङ्गको छाला भित्र पसाएर पनि यौनानन्द प्राप्ति गरिन्छ। यसलाई बाँध्यामैथुन (Docking) भनिन्छ। सह-हस्तमैथुन (mutual masturbation) पनि एक प्रकारको तरिका हो। रोहःघर्षण मैथुन(dry hump) गर्ने अर्थात् एक पुरुष अर्कोको माथी चढेर घर्षणात्मक गतिद्वारा यौनानन्द लिने गर्दछन्।
यौन सम्पर्कमा हुने यौन चाहनाको भूमीकाका आधारमा समयौनिक पुरुषहरूलाई चार प्रकारमा विभाजन गरिएको हुन्छ: टप(top), बटम(Bottom), भर्साटाइल(Versatile) र साइड(side)। जुन पुरुषले आफ्नो लिङ्गो अर्को पुरुषको गुदद्वारमा छिराएर यौन सन्तुष्टि लिन्छन् उनीहरूलाई ‘टप’ भनिन्छ; जो आफ्नो गुदद्वारमा अरुको लिङ्गो पसाएर यौन सन्तुष्टि लिन्छन् उनीहरूलाई ‘बटम’ भनिन्छ। त्यसै गरी जो आफ्नो गुदद्वारमा पनि लिङ्गो छिराएर र अर्को पुरुषको गुदद्वारमा आफ्नो लिङ्गो छिराएर यौन सन्तुष्टि लिन्छन्, उनीहरू भर्साटाइल हो। अर्को भाषामा टप र बटम दुबैको भूमीका निर्वाह गर्ने। कोही भर्साटाइलहरू ‘पूर्ण भर्स'(pure verse), जो दुबै भूमीकाहरू पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न चाहन्छन्, अर्थात् आफ्नो लिङ्गो पनि छिराउने र अर्कोको लिङ्गो पनि आफ्नोमा छिराउने दुबै गतिविधि द्वारा मात्र सन्तुष्टि हुने। यो कृयाकलाप एकले अर्कोलाई पालै पोलो गर्न सक्छन्। यसै गरी ‘टप भर्स'(top verse) भन्नाले ती भर्साटाइलहरू जो ‘टप’को भूमीकामा अलिक बढी रूची राख्छन् भने ‘बटम भर्स'(bottom verse)हरू ‘बटम’को भूमीकामा अलिक बढी रूची राख्छन्। यसै गरी ‘साइड’ (side) भन्नाले टप, बटम वा भर्स सरह गुदद्वारमा प्रवेशात्मक यौन सम्पर्क (penetrative sex) रुचाउँदैनन् र गैर-प्रवेशात्मक यौन सम्पर्कबाट सन्तुष्ट हुन्छन्।
महिला-महिला बीचको यौन सम्पर्क
तस्वीर स्रोत : Dissolve
महिला-महिलाबीच सेक्स गर्ने पनि विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। सामान्यतः समयौनिक महिलाहरू चुम्बन, र विभिन्न उत्तेजित ढङ्गको छुवाइबाट सुरुवात गर्छन्। कुनै महिलाको मुख, ओठ वा जिब्रो उत्तेजनाको अङ्ग हुन सक्छ। पितृसत्तात्मक सोच अनुसार समयौनिक महिलाहरूमा यौनानन्द हुँदैन भन्ने रूढीवादी भ्रम पनि छ। किनभन्दा पुरुष केन्द्रित र पितृसत्तात्मक सोँचका कारण महिला-महिला बीच यौन सम्पर्क गरेर चरम यौनानन्द हुन सक्छ भन्ने विषय बारे धेरैलाई थहा छैन अथवा हुँदैन भन्ने भ्रममा बसेका छन्।
समयौनिक महिलाहरू यौन सम्पर्क गर्दा खेरी एक अर्काको योनी चाट्ने, भगांकुर(Clitoris) खेलाउने, स्तन माड्ने र स्तनको मुन्टा चुस्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्छन्। त्यसै गरी मुखले यौनी चलाइदिने, वा मुखले गुदद्वारमा खेलाउने जस्ता क्रियाकलाप पनि गरिन्छ। समयौनिक महिलाहरूको योनी रस निस्कदा उत्तेजना बढी हुन्छ। यदि केही गरी प्रवेशात्मक यौन सम्पर्क(penetrative sex) गर्न चाहेमा यौन खेलाउना(sex toys) जस्तै डिल्डो(dildo), पहिरणी-डिल्डो(strap-on dildo)को प्रयोग पनि गर्छन्। यसै गरी योनी जुदाइ र योनीको घर्षणबाट पनि यौन सन्तुष्टी पाउन सकिन्छ। साथै एकले अर्काको योनीमा दलेर पनि यौन सन्तुष्टी लिने गर्दछन्। भेदामैथुन (Fingering)को मार्फत पनि चरम यौनानन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ।
समयौनिक महिलाहरू एक अर्काको संवेदनशील अङ्गहरूमा खेलाएर चलाएर यौन उत्तेजना बढाउने गर्दछन्, जसमा स्तन र स्तनशिखा/दूदको मुन्टो हुन सक्छ। स्तनशिखा चलाउनाले अक्सिटोसिन र प्रोल्याक्टिन हर्मोन उत्पादन हुन्छ। यसै गरी भङ्गाकुर खेलाउने, हातले व जिब्रोले, र सह-हस्तमैथुनबाट पनि चरम यौनानन्द सम्म पुग्न सकिन्छ। वक्तयोनी मैथुन (Cunnilingus) अथवा योनीमा गरिने मुख मैथुन पनि गरिने गरिन्छ। त्यसै गरी वक्तलुब्धक मैथुन (Anilingus) अथवा गुदद्वारमा गरिने मुख मैथुन भने थोरै मात्रमा अभ्यासित देखिन्छ। सामान्य प्रकारको महिला-महिला यौन सम्पर्क भने मार्जनःमैथुन (Tribadism) हो, जसमा एक महिलाले आफ्नो योनी अर्को महिलाको योनीमा जोडेर, भङ्गाकुर र भङ्काकुर मिलाएर द्रुतघर्षण/ बेस्सरी दल्ने गर्ने गर्दछ। यसलाई अङ्ग्रेजीको सामान्य बोलीचालीमा ‘सिजरिङ’ (Scissoring) भनिन्छ।
समयौनिक महिलाहरूमा पनि यौन भूमीकाको आधारमा टप, बटम र स्वीच भनेर हुने गर्दछ। जो महिला अर्को महिलाको माथी चढेर यौनाभ्यास गर्न चाहन्छन, उनीहरूलाई टप र जो महिला आफू माथी अर्कोचढेर यौनाभ्यास गर्न चाहन्छन्, उनीहरू बटम भन्ने गर्दछन्। र त्यसरी पालैपिलो एक अर्कालाई दुबैजनाले आनन्द लिने महिलाहरू भने स्वीच(switch) हुन्।
Previous Post You are free to speak, but…
Next Post Transwomen are women, not third genders